Inona ny fihenan'ny fahita matetika amin'ny finday avo lenta? | Androidsis
Inona ny fihenan'ny fahita matetika amin'ny finday avo lenta?
Ignacio Sala | | Fitaovana Android
Ny findainay dia nanjary fanitarana anay, ahafahanay manao izay rehetra ao an-tsaina. Rehefa mijanona tsy miasa na mandeha tsy mandeha amin'ny laoniny, ny hevitra hisarahana aminy ny fanamboarana azy io dia mahatonga antsika hanontany tena raha safidy tsara kokoa hividianana safidy vaovao io. Soa ihany fa misy vahaolana tena tsotra.
Ny serivisy ara-teknika ofisialy dia tsy miavaka amin'ny hoe haingana sy mora vidy kokoa. Ny sinoa eo an-joron-tranonay dia tsy manome anay antoka fa mety ilainay, ka ny hany safidy azonay dia ny mitodika any amin'ireo zazalahy Tontolon'ny finday, orinasa iray izay manamboatra ny finday ao anatin'ny 1 ora amin'ny alàlan'ny fandehanana any amin'ny magazay, ao anatin'ny 24 ora raha maka izany izy ireo ary amin'ny 48/72 ora manerana an'i Espana.
1 Ireo singa mamaky finday matetika matetika
1.5 Jack headphone
1.6 Finday mando
1.7 Mpandahateny fitaovana
1.8 Tsy mamaky ny karatra SIM
1.9 Module fakan-tsary
2 Ohatrinona ny vidin'ny fanamboarana ny findaiko?
Ireo singa mamaky finday matetika matetika
Ny efijery dia iray amin'ireo ampahany finday avo lenta indrindra Na eo aza ny zava-misy fa ny taranaka vaovao dia mampiasa ny sosona fiarovana farany Gorilla Glass indray, fiarovana natao hiarovana ny efijery amin'ny rangotra, fa tsy amin'ny vongan-tany na fianjerana.
Ankoatra izany, io no singa lafo indrindra rehefa manamboatra telefaona finday dia tsy maintsy mitandrina foana isika na amin'ny efijery amin'ny fampiasana fiarovana amin'ny efijery ary amin'ny fiarovana ny fahamendrehan'ilay fitaovana amin'ny fampiasana fonony.
Indraindray, indraindray, izay mamaky dia tsy ny efijery ihany, fa ny vera miaro azy. Ity karazana fanamboarana ity, na dia lafo aza mora kokoa noho ny fanoloana ny efijery iray manontolo izy ireo.
Ny bateria finday avo lenta dia natao hanana tsingerin'ny fiainana manodidina ny 2 taonaNa dia indraindray aza, ny bateria dia mety misy lesoka amin'ny famokarana na noho ny fampiasana tsy mety (fiovana tampoka eo amin'ny maripana, fikorontanana), dia mety hivonto sy hametraka loza amin'ny tsy fivadihan'ny mpampiasa izany, satria mety hipoaka ilay izy.
Raha ny findainao nijanona tsy niasa intsony, mandeha miadana ve, tsy maharitra ny bateria toy ny rehefa mividy azy isika na efa nivonto (ny vodin'ilay fitaovana mivoaka mihoatra ny mahazatra) dia tonga ny fotoana hanoloana azy, ary arakaraka ny maha-ela azy no tsara kokoa.
Raha tsy mihetsika ny findainao finday avo lenta dia misy olana roa mety hiantraika aminy: maty tanteraka ny bateria na nitsahatra tsy niasa intsony ny mpampitohy mpampita, raha mbola nanamarina teo aloha isika fa mandeha tsara amin'ny telefaona hafa ny tariby mametra.
Ovao ny seranan-tsambo Izy io dia dingana tena haingana, mora ary mora amin'ny tanana ankavanana. Raha vola kely dia kely dia azonao atao ny mamerina ny smartphone anao.
Rehefa nandeha ny taona dia nihena ho telo ny bokotra ara-batana amin'ireo fitaovana: ny bokotra herinaratra sy ny bokotra volavola. Raha mahazo fitaovana any amin'ireo faritra ireo ny fitaovana finday, bokotra mety hijanona tsy miasa sa ataovy tsy mandeha amin'ny laoniny.
Azo inoana koa fa noho ny fampiasana tafahoatra, ireo dia nijanona niasa na tsy mandeha tsara. Ny fanamboarana io olana io, toy ny an'ny seranan-tsambo, dia tsotra, mora ary haingana.
Fifandraisana iray hafa izay mitsahatra tsy miasa intsony dia ny fifandraisana an-telefaona. Maha-lavaka, izay karazana loto mety hiafara amin'ny fidirana ao ary misy fiantraikany amin'ny asany ny fotoana.
Raha mikasa hampiasa ny findainao amin'ny rano masira ianao dia tsy maintsy tadidinao ny manadio azy tsara amin'ny rano madio, satria ireo tsiranoka masira hita tao anaty ranomasina metaly manimba, indrindra ireo izay mifandray mivantana amin'ny rano toy ny headphone jack.
Na dia manome toky antsika aza ny ankamaroan'ny mpanamboatra fa ny finday finday avo lenta mahatohitra rano izy ireoMiparitaka fotsiny izy ireo. Raha mampiasa finday finday matetika ianao ao anaty rano, na ao anaty pisinina, na mbola ratsy kokoa aza, any an-dranomasina, dia tokony ho adidinao foana ny manadio azy amin'ny rano madio alohan'ny hamaranana sy hahamaina azy.
Amin'izany fomba izany dia esory ny sisa rehetra masira mety hijanona eo ambonin'ny sy ny lavaky ny terminal ary mety hiafara manimba ny fitaovana ao anatin'ny fotoana fohy. Raha nisy triatra ny findainao ary niditra ny rano dia tsy very ny zava-drehetra, mbola azo atao ny mamerina azy amin'ny voaloboka.
Ny fiasan'ity singa ity dia mifandraika amin'ny rano, amin'ny ankamaroan'ny tranga. Raha mando mandritra ny fotoana be loatra ny finday dia azo inoana fa io singa io nijanona tsy niasa na niharatsy. Soa ihany fa azo atao ny manolo azy io tsy misy olana be.
Tsy mamaky ny karatra SIM
Raha manova ny karatra SIM tsy tapaka isika toy ilay manova ny fantsona, rehefa mandeha ny fotoana, ny faritra misy ny fifandraisana mamaky ny angon-drakitra dia afaka aza miasa intsony ary manolora lesoka vakiana na karatra, kisendrasendra.
Raha manana ny mampalahelo ianao very ny mpihazona SIM amin'ny findainao finday avo lenta, tokony ho fantatrao fa ity singa kely amin'ny smartphone ity, izay mamela azy tsy misy ilana azy tanteraka, dia azo vidiana tsy miankina.
Voaro amin'ny vera sy ao anatin'ny smartphone ianao, tsy azo inoana izany ny modely fakantsary miafara amin'ny fanapahana, indrindra raha nahazo kapoka.
Ny fanoloana ny maodelin'ny fakan-tsary sy ny vera miaro dia iray amin'ireo fanamboarana azontsika atao amin'ny finday alohan'ny hanadinoantsika azy tanteraka.
Ohatrinona ny vidin'ny fanamboarana ny findaiko?
Raha manana fahalalana momba ny elektronika sy / na mihevitra ny tenantsika ho toy ny olona mahay isika, dia afaka manandrana manamboatra ny anay amin'ny alàlan'ny fahazoana ireo faritra ilaina. Raha tsy hoe fantatrao tsara izay ataonao, raha tsy te havela tsy misy telefaona ianao dia tsara kokoa ny mankany amin'ny orinasa manampahaizana manokana amin'ny fanamboarana.
Rehefa mandinika ny fanamboarana ny findainay, tsy te ho gaga isika. Ny tsara indrindra dia ny mankany amin'ny fivarotana izay mamakafaka ny fitaovantsika sy manolotra teti-bola mihidy izay manondro ireo singa rehetra tsy maintsy soloina mba ho velona indray ny fitaovantsika.
Na dia toa miharihary aza izanyNy orinasan'ny fanamboarana fitaovana finday dia manome teti-bola mihidy ho antsika, miantoka izany satria manome antoka fa raha misy singa tapaka mandritra ny fanamboarana dia tsy mila mandoa izany izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Inona ny fihenan'ny fahita matetika amin'ny finday avo lenta?
Ny zavatra rehetra antenaina amin'ny OnePlus 9T: mety asongadinina, masontsivana, vidiny ary daty famoahana
Redmi 10, sarintany midadasika vaovao an'i Xiaomi misy fakantsary 50 MP quad